Mourinho: “Koox Walba Way Naga Baqaysaa”
Tababaraha Manchester United, Jose Mourinho ayaa sheegay in dhamaan kooxaha iskugu soo hadhay tartanka Champions League marxaladda wareegga 16-ka ay ka baqayaan kooxdiisa.
Manchest United oo 2-1 kaga adkaatay CSKA Moscow Salaasadii ayey kooxdiisu kaalinta koowaad kaga soo baxday Group A, ayaa waxay sugaysaa in maalinta Jimcaha ay isku aadka wareegga 16-ka ka qaaddo nasiibkeeda iyo kooxda ay ku baxayso.
United ayaa dooneysa markeedii ugu horreeyey ka gudubto wareegga 16ka tan iyo 2014 markaas oo David Moyes uu tababare ka ahaa kooxda.
Mourinho oo warbaahinta la hadlay markii ay dhamaatay ciyaartii CSKA Moscow, ayaa waxa uu yidhi : “Mushkilad naguma aha kooxda aanu ku beegmi doono, waxaanse ogahay in aanan nasiib fiican ku lahayn isku aadka, waxaana ii wanaagsan in aan iska aamuso oo aan illoobo, sababtoo ah bisha February ayaa la ciyaari doonaa. Inta ka horreysa waa inaan diiradda saaro tartamada dalka Inigiriiska.” Sidaas ayuu yidhi Mourinho.
Mourinho waxa uu xusay in kooxaha ku beegma marka isku aadka la sameeyo ay na nixi doonaan, waxaanu yidhi: “Waxay ila tahay in kooxina aanay farxad la boodboodi doonin markay nala ciyaarayso, aniguna waxaan ku faraxsanahay in kooxdaydu ciyaar tayo leh ugu soo baxdo wareegga 16-ka.”
Goolhaye Donnarumma Oo Loogu Hanjabay Dil iyo Nin Garoonka Ugu Soo Galay Oo Lacag Ku Daadiyey
Ingiriiska Oo Laga Hor-qaaday Wiilka Liverpool Ee Woodburn Oo Lagu Daray Xulka Wales
Hargeysa: Akadamigga Kubadda Cagta ee Ciyaarsame oo Tartano u soo Xidhay Caruurta Da’yarta ee uu Gacanta ku hayo + Sawirro
Griezmann Oo Si Rasmi Ah Niyadda Uga Jebiyey Manchester United
Atlético Madrid v Bayern: Hordhaca ciyaarta xiisaha Leh ee Caawa
Mourinho Oo Beeniyey Inuu Iscasilayo